China Precision thusi ukudla imishini ifektri abakhiqizi | Yungong
Izingxenye zePump Valve
Izingxenye Zemishini Yokudla
Imayini Imishini Ekubunjweni
Ukulingiswa Kwedivayisi Yezokwelapha
Irekhodi lethu lemibukiso
Precision thusi imishini ukudla
Precision thusi imishini ukudla ngokuvamile usebenzisa insimbi impahla, okudinga phezulu ebusweni qeda. Imodeli yensimbi engenasici isetshenziswa kakhulu ku-316l, 304 steel, enokuma okuyinkimbinkimbi.
Izingxenye zemishini yokudla —— ukupakisha i-auger
Isetshenziselwa umshini wokugcwalisa i-spice powder / umshini wokupakisha we-powder / umshini wokugcwalisa umshini we-auger. Inyama yokusila
Izinto: insimbi engagqwali, i-carbon steel
Izinto zensimbi engagqwali zigcwaliswa kakhulu ngenqubo ye-silica sol.
Sikhonza imboni yokudla nobisi ezindaweni eziningi, kusuka kusiki benyama, kuya kumaswidi nemishini ekhiqiza ushokoledi, imishini ye-ice-cube, abenzi bekhofi, ukucubungula izinkukhu, kanye nokuwasha izitsha zokuhweba.
Imvamisa uhlelo lokusebenza lokudla nolobisi luyacwiliswa futhi luyathandwa ukuqinisekisa inhlanzeko ephezulu.
I-Yungong njengelinye lamagama athenjiwe kakhulu embonini yezokudla nezobisi futhi inezindlela nokwazi ukukhiqiza ukukhishwa kwekhwalithi yokutshala imali ehlangabezana nemininingwane ebekiwe edingeka ekudleni kwakho kanye / noma izidingo zobisi.
Kungani Ukutshalwa Kwezimali Zemboni Yokucubungula Ukudla?
Kukhona izinzuzo eziningi zensimbi engenasici yokufaka imali kunamanye amasu wensimbi.
Yize kunomlando omude wokuphonsa insimbi engagqwali ekubunjweni kwemali, izinkampani eziningi zisebenzisa le nqubo ngezinzuzo ezinikezwayo.
Izinzuzo eziyinhloko zibhalwe ngezansi:
Ikhwalithi ethuthukisiwe:Ukulingiswa kokutshalwa kwezimali imvamisa kuyinqubo yokusakaza ngokunemba. Ngakho-ke le nqubo yokusakaza ingadala izingxenye eziqonde kakhulu zomkhakha wokucubungula ukudla.
Machining eyehlisiwe: Ngenxa yokuthi lezi zisikhunta ziholela kulokho empeleni umkhiqizo wokugcina kunemishini emincane kakhulu yokulungiswa kanye nokuguqulwa okudinga ukwenziwa ensimbi ukuze ikwenze kufinyelele ekucacisweni kwekhasimende ngemuva kwenqubo yokubumba.
Lokhu konga imali ngokuhamba kwesikhathi njengoba kunciphisa emuva esikhathini senqubo yokukhiqiza isiyonke.
Ukwakheka Ngokwezifiso: Imvamisa, ukusakazwa kotshalo-mali kwenziwa ingxenye eyodwa ngasikhathi.
Lokhu kunikeza amakhasimende inketho yokwenza osayizi abenziwe ngezifiso bezinto zemishini yokudla.
Lokhu konga indawo yokukhiqiza isikhathi esiningi nezinsizakusebenza ngoba akudingeki ukuthi zenze umsebenzi kwimikhiqizo ikhasimende elingenasidingo sangempela sayo.
Langaphambilini Ukusakazwa Kwensiza Yokucisha Umlilo
Olandelayo: Ukulingiswa kwehadiwe - insimbi engagqwali
Ukutshalwa Kwezimali Zomshini Wokudla
Ukulingiswa Komshini Wokudla Okuqondile
Ukulingiswa Kwemishini Yokudla
Imishini Yokudla Imishini Yokulingisa
© Copyright - 2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.